ချစ်ကြည်အေး: အောချတ် သံသရာ
အသက်လေး နဲနဲရလာတော့ နားရက်ဆို အိမ်မှာပဲ နေချင်တယ်။ အေးအေးဆေးဆေး နားချင်တယ်။ အိမ်မှာပဲ ကွန်ပြူတာနဲ့ မျက်နှာ တပ်ထားချင်တယ်။ လူတွေကလည်း အဲဒီ့နေ့လေးတွေကျမှ မွေးနေ့၊ အိမ်တက်၊ မင်္ဂလာဆောင်နဲ့ သဒ္ဓါဆွမ်းကျွေးခြင်းဆိုတဲ့ အမှုတွေ ပြုကြတယ်။ အဲလိုနေ့လေးတွေကျမှ မိတ်ဆွေတွေ အချင်းချင်းလည်း တွေ့ဆုံကြရတာ ဆိုတော့ကာ စနေ၊ တနင်္ဂနွေဆို အိမ်မှာ မနေနိူင်ဘူး လမ်းပေါ်မှာ ရှိနေတာ များတယ်။ ဟိုကဖိတ်တာ သွားစားလိုက်၊ ဒီကဖိတ်တာ သွားစားလိုက်ပေါ့။ ဘယ်အလှုမှ အဖိတ်မခံရလို့ စားစရာအိမ်မရှိတဲ့ နေ့မျိုးမှာတော့ နှစ်ယောက်သား မတိုင်ပင်ရဘဲ အပြင်ထွက် စားကြဖို့ သဘောတူကြရတယ်။
၁၀နှစ်ကျော် အတူနေလာကြပြီးတဲ့အခါ တယောက်မျက်နှာ တယောက် ဆိုတာထက် အပြင်မှာ တခြား စိတ်ဝင်စားစရာတွေ အများကြီး ရှိနေပါလားဆိုတာ ပိုသဘောပေါက်လာတယ်။ နဲနဲတောင် နောက်ကျနေသလား မသိ...။
ဒီလိုနဲ့ ပလာဇာစင်ဂါပူရ လို့ခေါ်တဲ့ ရှော့ပင်းမောကြီးထဲက ဆိုင်လေးတဆိုင်မှာ နေ့လည်စာ သွားစားခဲ့ကြတယ်။ စားသောက်ပြီးတော့ အချိန်က နေ့လည် ၂နာရီသာသာပဲ ရှိသေးတယ်။ အပြင်မို့ ထွက်မိပြီဆို တော်တော်နဲ့ အိမ်မပြန်ချင်တဲ့ ခြေထောက်တွေကြောင့်၊ လက်ထဲမှာ ပါလာတဲ့ ကင်မရာကြီးကြောင့် အောချတ်ဖက် လှည့်ကြဖို့ ဖြစ်လာတယ်။ ခရစ်စမတ်အတွက် မီးအလှဆင်ထားတာတွေ ရိုက်မယ် စိတ်ကူးနဲ့ပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ အချိန်က နေ့လည်ခင်းကြီးမို့ အောချတ်ရဲ့ အလှအပကို မခံစားနိူင်ဘူး ဖြစ်တယ်။ ကြည့်လေ...ခရစ်စမတ်ပွဲတော်အကြို အလှဆင်ထားတဲ့ မီးတွေကို နေ့ခင်းကြောင်တောင် ကြည့်ရတာဟာ နှုတ်ခမ်းမွှေးမပါတဲ့ ကုလားကို တွေ့ရသလို ပြောင်ချော်ချော် နိူင်လှတယ်။ မပြည့်စုံဘူး။ ပါဖက် မဖြစ်ဘူးပေါ့...။
ဒါနဲ့ပဲ ဟိုသွား ဒီသွား ဟိုကြည့် ဒီကြည့်နဲ့ အမှောင်ကို စောင့်ရတယ်။ အောချတ်ရဲ့ အလှဟာ အမှောင်လာလို့ မီးတွေထွန်းညှိမှပဲ ရုပ်လုံးကြွ လှပလန်းဆတ်လာတယ်။
လက်ရှိ Scott Road-စကော့လမ်း ဖြစ်လာမဲ့ နေရာမှာ အရင်က Dr Junရဲ့ ဥယျာဉ်နဲ့ စိုက်ခင်းတွေရှိခဲ့တယ်။ Dr Jun ဆိုတာက အောချတ်လမ်းမကြီး ဆိုတဲ့ အမည်ရွေးချယ်မှုကို အတည်ပြုပေးခဲ့ရသူပါ။ အောချတ်ဆိုတာကို nutmeg (အသီးတမျိုးပါပဲ), pepper နဲ့ gambier ဆိုတဲ့ ပန်းကလေးတွေဆီကနေ ရလာတာ။ ၁၈၃၀မှာကတည်းက လမ်းပေါက်နေပေမဲ့ ၁၈၃၆ခုနှစ် George Colemanရဲ့မြေပုံမှာတောင် အောချတ်လမ်းမလို့ အမည် မတွင်ခဲ့သေးဘူး။
Meritus Mandarin Hotel နဲ့ Ngee Ann City နေရာဟာလည်း တချိန်က graveyardတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၁၈၄၆ခုနှစ် ဝန်းကျင်လောက်ကပေါ့။ ၁၉၆၀မှာတော့ တဖြည်းဖြည်းချင်း လူနေအိမ်ခြေတွေ၊ ဘန်ဂလိုတွေရှိလာခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ Dhoby Ghaut MRT Station ဟာလည်း တချိန်က Jewish cemetery ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၄ခုနှစ်ကျမှ ဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့တာ။ ကျမတို့ရွာမှာ သုဿန်ရွှေ့သလိုနေမှာပေါ့။ အဲဒီကနေမှ တဖြည်းဖြည်း စည်ပင်လာခဲ့ပြီး ခု မြင်ရတဲ့ အောချတ်လမ်းမကြီးရဲ့ ခမ်းနားမှုကြီး ဝင်ရောက်နေရာယူလာခဲ့တာ။
ခုတော့လည်း အောချတ်ဟာ စလုံးရောက်ရင် မလျှောက်မဖြစ် လျှောက်ရမဲ့လမ်းမကြီးတခုအဖြစ် ထည်ထည်ဝါဝါ ရှိခဲ့ပြီ။ ဘယ်သူကများ အောချတ်လမ်းမကြီးရဲ့ ရာဇဝင်ကို ခုလို သုဿန်တစပြင်၊ သချိုင်းမြေအဖြစ် တွေးမိကြမှာလဲနော်။ ဘုရားဟောတရားအရ ဆိုရင်တော့ ခြေချရာ နေရာတိုင်းဟာ သတ္တဝါတွေရဲ့ သချိုင်းဖြစ်တယ် လို့ ဆိုတယ်။ အဲသည်လောက်အောင်ပဲ သံသရာကြီးက ရှည်လျားလှတယ်။
ကျမတို့ သိတဲ့ အောချတ်ရဲ့ ပွဲတော်ညတွေကတော့ တနှစ်နဲ့ တနှစ် မတူအောင်၊ တနှစ်ထက် တနှစ် ပိုမို ဆန်းပြားသည်ထက် ဆန်းပြားအောင် တန်ဆာဆင်ထားလေတဲ့ အောချတ်ရဲ့ မျက်နှာစာတွေသာ ဖြစ်တယ်။ သေချာတာက မနှစ်က အောချတ်ကို ဒီနှစ် ပြန်မရနိူင်သလို၊ ဒီနှစ် အောချတ်ကိုလည်း နောက်နှစ်မှာ ပြန်မရနိူင်ခြင်းပါပဲ။ မျက်စေ့အောက်မှာ တွေ့နေရတဲ့ ရေရှင် စီးဆင်းနေသလိုမျိုး...ရေတွေကတော့ ရေတွေပဲ။ ဒါပေမဲ့ ရှေ့ရေတွေကို နောက်ရေတွေက အစားထိုး စီးဆင်းနေကြတာမျိုး။ အောချတ်ရဲ့ သံသရာဟာလည်း ဒီလိုပါပဲလေ....။
ဒီနေ့ ရုံးသွားရတာ ပျော်တယ်။ လက်ဆောင်တွေ ရတယ်။ ဘယ်သူမှ အလုပ်ရယ်လို့ မယ်မယ်ရရ မလုပ်ကြဘူး။ မန်နေဂျာကြီးလည်း ပျော်နေတယ်။ သူက ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်လေ။ ခဏနေတော့ မန်နေဂျာကြီးနား သွားမေးတယ်။ မရိုးနိူင်တဲ့ မေးခွန်းပါ။ ဒီနေ့ X'mas eve နေ့ဝက် ရုံးဆင်းမလားဟင် လို့။ ဟိုးနေ့ကလည်း မေးပြီးသား။ ဒါပေမဲ့ သူ ဒီနေ့ စိတ်များ ပြောင်းသွားမလား ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက် လက်ကျန်လေးနဲ့ သွားမေးတာ။ နိူး နိူး Full working dayတဲ့...။ ကွာ...သူ စိတ် သိတ်ခိုင်တယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ခွင့် နေ့ဝက် ကောက်တင်ပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။ ဘာ တတ်နိူင်သေးလဲ...ခု ဒီပိုစ့်ကို အိမ်ကနေ ရေးတင်ပလိုက်တယ်....:)
အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်စရာ X'mas ပွဲတော်ညများ၊ ပျော်ရွှင်စရာ ပိတ်ရက်ရှည်များ ဖြစ်ကြပါစေရှင်....။
မောင်မျိုး Fri Dec 24, 06:51:00 PM GMT+8
အတူနေလာကြပြီးတဲ့အခါ တယောက်မျက်နှာ တယောက် ဆိုတာထက် အပြင်မှာ တခြား စိတ်ဝင်စားစရာတွေ အများကြီး ရှိနေပါလားဆိုတာ ပိုသဘောပေါက်လာတယ်။ နဲနဲတောင် နောက်ကျနေသလား မသိ...။
အဲ့တာ ဂယ်ကြီးပေါ့ ကြောက်ဘူးလားဗျး)
AMK Fri Dec 24, 08:06:00 PM GMT+8
၁၀နှစ်ကျော် အတူနေလာကြပြီးတဲ့အခါ တယောက်မျက်နှာ တယောက် ဆိုတာထက် အပြင်မှာ တခြား စိတ်ဝင်စားစရာတွေ အများကြီး ရှိနေပါလားဆိုတာ ပိုသဘောပေါက်လာတယ်။ နဲနဲတောင် နောက်ကျနေသလား မသိ...။ <<<အနောတို့ နားဝေးနေလို့Merry X'mas & Happy New Year
မေဓာဝီ Fri Dec 24, 08:39:00 PM GMT+8
နှုတ်ခမ်းမွှေးမပါတဲ့ကုလားရော နှုတ်ခမ်းမွှေးပါတဲ့ ကုလားရော .. ကြည့်သွားတယ် အမချစ်ကြည်ရေ ... ။ နှစ်မျိုးလုံး လှပါတယ်။ :P
ပျော်ရွှင်စရာ ခရစ်စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ ... ။
baby taster Fri Dec 24, 09:07:00 PM GMT+8
ခရစ်စမတ်ပွဲတော်အကြို အလှဆင်ထားတဲ့ မီးတွေကို နေ့ခင်းကြောင်တောင် ကြည့်ရတာဟာ နှုတ်ခမ်းမွှေးမပါတဲ့ ကုလားကို တွေ့ရသလို ပြောင်ချော်ချော် နိူင်လှတယ်။ မပြည့်စုံဘူး။ ပါဖက် မဖြစ်ဘူးပေါ့တဲ့ ဟဟတကယ်လားအမ
ဇွန်မိုးစက် Sat Dec 25, 01:01:00 AM GMT+8
Tang က ဒီနှစ် Best Dressed Award ရသွားတယ်နော် အစ်မချစ်။
ဇွန်တို့ရုံးက full day ပိတ်တယ် ဟင်း..ဟင်း... :P
Orchard Road ရဲ့ history ကို ပြောပြသွားတဲ့ အမကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တစ်ခါမှ သူ့ရာဇ၀င်ကို စိတ်ဝင်တစား မရှာဖတ်ကြည့်မိဘူး။ ခုတော့ သိလိုက်ရပြီ တစ်ချိန်က သုဿန်တစပြင် ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ။ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်ပြောပြလိုက်ဦးမယ်။ :)
Merry X'mas too you!
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Sat Dec 25, 02:36:00 AM GMT+8
အစ်မ ဓာတ်ပုံလေးတွေ လှလိုက်တာ
နှစ်မျိုးစလုံးလှပါတယ်အစ်မရဲ့ .. ရိုက်တဲ့သူတော်လို့လည်း ဖြစ်မယ်နော်...
ပျော်စရာခရစ္စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ အစ်မရေ...
ငွေစန္ဒာ Sat Dec 25, 07:53:00 AM GMT+8
ဖြစ်ပါစေ ... ။
Anonymous Sat Dec 25, 09:10:00 AM GMT+8
1984 demolished cemetery, 1960 already developed,
sonata-cantata Sat Dec 25, 11:02:00 AM GMT+8
နှုတ်ခမ်းမွှေးနဲ့ ကုလားကြီးပုံက ဘယ်မှာတုန်း ... :P
စာကြွင်းစာကျန်ပါမကျန် စားသွား အဲ...ဖတ်သွားသည်။
ချစ်ကြည်အေး Sat Dec 25, 11:25:00 AM GMT+8
Anonymous>> Thank you for your comment. Information and the years are correct. It is just chronologically paragraph arrangement. I had already changed the para.
မောင်လေး Sat Dec 25, 01:19:00 PM GMT+8
ဟင်းးးးး၁၀နှစ်ကျော်မှ သိလာပြီလား အစ်မရဲ့....။အဲဒါတွေကြောင့် လူပျိကြီး
လုပ်နေတာ....:D။ကျွန်တော်တော့ ဒီညမှသွားကြည့်ရမှာ..။ခုတော့ အစ်မဆီက
ပရီ ကြည့်သွားပြီဗျိုးးးးး။ကျွန်တော်တို့ရုံးတော့ နေ့ဝတ်ပိတ်ပေးတယ်ဗျ....
ကလူသစ် Sat Dec 25, 01:26:00 PM GMT+8
ဘယ်ကုလားကို စေ့စေ့ပေါက်ပေါက် လိုက်ကြည့်ထားပါလိမ့်။ လမ်းကတော့ တော်တော်လျှောက်နိုင်တာပဲ။ ဟိုဘက်ထိပ် ဒီဘက်ထိပ်အရောက်။
ညီမလေး Sat Dec 25, 06:22:00 PM GMT+8
ညီမလေးလဲ တူတူပဲချစ်ချစ် အပြင်သိပ်မထွက်ဖြစ်ဘူး ။ အိမ်နဲ့ကျောင်း၊ ကျောင်းနဲ့အိမ် သီချင်းတွေ စာအုပ်တွေကြားမှာပဲး)
ဒါပေမဲ့ တခါတခါ အပြင်ထွက်ရင်တော့ အော်...ဒီနေရာက နေ့ကျ ဒါမျိုး၊ ညကျ ဒါမျိုးကိုလို့ ဖြစ်မိတာတွေ အများကြီးးး တခါတခါ ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်သွားရတာလဲ ရနံ့သစ်တခုပေါ့။ ခုတလောတော့ သွားဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရင်း ကြိုးစားရင်း မသွားဖြစ်ရင်း ဟဟဟားး
စကားမစပ် ... ချစ်ချစ်ဓါတ်ပုံတွေ သိပ်လှတာပဲ ။ နှတ်ခမ်းမွေးမပါတဲ့ ကုလားကြီးလဲ လှရှာပါတယ်လေ ချစ်ချစ်ကလဲးP
Anonymous Sat Dec 25, 10:37:00 PM GMT+8
မီးတွေပေါတယ်တအား စစ တို့ဆီ ပို့ပေးပါအုံး ဒီမှာသုံးရင်း ပြတ်သွားလို့။
အပြင်မှာ တခြား စိတ်ဝင်စားစရာတွေ အများကြီး ရှိနေပါလားဆိုတာ ပိုသဘောပေါက်လာတယ်။ အခုတော့ ဒီစကားပြောပြီပေါ့။ အရင်တုန်းကတော့ အမေပြောတဲ့ အမောပြေလေးဆို။
သူ နိုး လဲ ကိုယ် မနိုးတော့ ဘာတတ်နိုင်တုန်းဗျ နော်။
Min Sat Dec 25, 10:48:00 PM GMT+8
nutmeg (အသီးတမျိုးပါပဲ) =
ဗညားရှိန် Sun Dec 26, 11:14:00 AM GMT+8
မချစ် လာလည်သွားတယ် စာ အစအဆုံးဖတ်သွားတယ် . . . ဒါပေမဲ့ တနေရာအရောက်မှာ ကျွန်တော် ဖတ်လိုက်မိတဲ့ စာလုံးကြောင့် တော်တော်တော့ ကြောင်သွားတယ် ဒါနဲ့ မဟုတ်သေးပါဘူးပေါ့ ဆိုပြီး ပြန်ဖတ်တော့မှ ကိုယ့်အမှားမှန်းသိပြီး ရီမိတော့တာပဲ . . . ဖတ်လိုက်မိတဲ့ စာလုံးက . . . . စားကြွင်းစားကျန်တဲ့း)))))))))
Htoo Tay Zar Mon Dec 27, 03:33:00 PM GMT+8
Orchard က အရင်က သင်းချိုင်းဆိုတာ သိတောင် မသိရဘူး လူသေတွေတော့ တင်းနေတော့မှာပဲ... =D
T T Sweet Mon Jan 03, 01:25:00 PM GMT+8
အောချတ်လိုပဲ သင်းချိုင်းကနေ မြို့ပြဖြစ်တဲ့နေရာတွေ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အများကြီးရှိမှာပဲလို့တွေးမိတယ်။ အခုစည်ကားနေတဲ့ စော်ပွားကြီးကုန်း အဝေးပြေးဂိတ်ကလည်း အရင်က သင်းချိုင်းပဲ။ ငယ်ငယ်က အဲ့နားမှာ ကျောင်းတက်ရလို့သိတာ။